U-Vera Glagoleva: ukuphila okuqhakazile, ukugula okubi nokufa okungazelelwe kwe-actress yakho ethandekayo
Izindaba zezindaba mayelana nokufa okungazelelwe kweVera Glagoleva zashaya yonke isikhala seSoviet. Akunakwenzeka ukukholelwa ukuthi le ndoda enhle enekhono elidlulile yayidlulile ngaphandle kokuhlala nokuzalwa kwakhe kwezinsuku ezingu-62. Ngaphezulu kenyanga edlule wadansa ngendlala emshadweni wendodakazi yakhe encane u-Anastasia Shubskaya no-Alexander Ovechkin, futhi namuhla, izihlobo ezibuhlungu zicela ukuthandazela ukuphumula komphefumulo wakhe oqhakazile. UVera Glagoleva waphila kanjani futhi yikuphi okulandelwayo ezinhliziyweni zethu?
Amakhasi ahlabayo kakhulu e-Vera Glagoleva
UVera wazalelwa futhi wakhulela eMoscow, emathonjeni kaMatrikari futhi wachitha isikhathi sakhe sonke ebuntwaneni kanye nomfowenu kaBoris nabafana basekhaya. Intombazanyana encane encane eyayisemncane yayinomlingiswa wensimbi, yayingumdlali wezemidlalo, yayenza umnsalo wokulwa nomnsalo futhi yahlela ngisho nokuba iqhawe le-Olympic kulo mdlalo.
Kodwa umhlangano wamathuba nomqondisi uRoonon Nakhapetov washintsha impilo yakhe kuze kube phakade. Intombazane engavamile enamehlo amakhulu ahlaba umxhwele umqondisi, futhi wayithatha efilimu yakhe ethi "Ekupheleni Kwezwe". Lo msebenzi wawuyisiqalo somlando wabo wokudala nesothando. Naphezu kweminyaka engu-12 yobudala obuhlukile, ngonyaka olandelayo babeshadile.
Ukholo lwaluyena nje owesifazane othandekayo waseRodion, kodwa futhi nomuzi wakhe: wawudutshulwa kuwo wonke amafilimu akhe ngaleso sikhathi. Ngokufanayo, yaqala ukumema abanye abenzi befilimu. Ngo-1983, uGlagoleva wabhala ngefilimu kaVitaly Melnikov ethi "Ukushada nenduna," eyamkhazimulisa ngaso leso sikhathi kulo lonke iSoviet Union. Ngalolu daba, wabizwa ngokuthi umculi omuhle ka-1986 ngokusho komagazini "Soviet Screen".
Emva kweminyaka eyishumi nesine yokuphila okuhlanganyelwe, ukubumbana komqondisi nomdlali we-actress kwahlukana. UNahapetov wathuthela e-United States, futhi uVera namadodakazi akhe amabili, u-Anna no-Masha, bahlala eMoscow. Lokhu kwakuyisikhathi esibucayi empilweni yakhe, kodwa akazange ahluleke kuphela ukuphula i-Glagolev, kodwa yenza kube namandla nakakhulu. Ngenkinga ezweni leli-90, u-Vera waqala ukuqondisa futhi ngokushesha wadubula ifilimu yokuqala "Broken Light." Ngalo, wafika emcimbini wefilimu e-Odessa futhi lapho wahlangana nomdayisi ophumelelayo uCyril Shubsky.
UGlagolev uphakamise ukuthi atshale ifilimu yakhe entsha, futhi yena, washaywa ubuhle nobuhle bakhe, okuthiwa uVera ukuba ashade. Ngothando uShubsky wancoma umdlali wezithombe ngezipho ezithandekayo nezimbali ze roses futhi ngokushesha wenza abangane namadodakazi akhe. Ehluleka ukumelana nokucindezela okunjalo, uGlagoleva waphendula ngokuphindaphindiwe kukaCyril futhi, eshiya le cinema, iminyaka emibili, waya naye eSwitzerland. Wazalelwa indodakazi yakhe encane u-Anastasia, ubuhle kanye nentandokazi yomndeni wonke.
Ngokushesha umndeni wabuyela eRussia, uVera waqala ukwenza amafilimu futhi, ebonakala ezithombeni "Ohluphekile Sasha" futhi "Akukhuthazwa ukucasula abesifazane". Kodwa-ke, izisusa zomqondisi beziphethe kahle, futhi uGlagolev wagcina eqondisa. Ngamanye amafilimu amahle kakhulu avela ezikrinini zakhe - "U-oda" no-Alexander Baluyev, "I-Devil's Wheel" no-Alena Babenko nesithombe esinqabileyo esithi "Impi Enye" mayelana nesiphetho esibuhlungu besifazane abanjwe edwaleni le-Great Patriotic War.
Izinyanga zokugcina zokuphila kukaVera Glagoleva
I-Glagolev ezinsukwini zokugcina yayigxilile emsebenzini futhi igcwele izinhlelo zokudala. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule waqala ukudubula isithombe esisha "Umgodi wokugoba". Ingxenye kuphela yaseRussia eyafakwa, uhambo lokuya e-Kazakhstan lwalusendleleni ... Akekho osebenza nabo baseVera Vitalyevna abasolwa ukuthi lo wesifazane onamandla onamandla wayegula iminyaka eminingi. Umdlali we-actress wamfihla ngokucophelela ukuxilongwa kwakhe ngisho nabangane abaseduze, engafuni ukubangela ukukhathazeka.
Ekupheleni kukaMeyi, ulwazi luvele ngokulimala okubukhali empilweni kaGlagoleva, ophikisana nomdlali wakhe nomndeni wakhe ngokushesha. Ngokushesha ngemva kwalesi sigameko, yena, njengoba ehlale ejabule futhi enamandla, waqala ukuvela ezenzakalweni zezwe, kunalokho ekugcineni waxosha konke ukungabaza. NgoJulayi 8 eMoscow, umshado omkhulu wendodakazi yakhe encane u-Anastasia nomdlali weHockey ovelele u-Alexander Ovechkin. UVera Vitalievna wayebukeka enhle, edansa kakhulu, ehleka, ehleka futhi ehlabelela izingoma nabaculi abamenywe. Akuzange kube khona inhloko yomuntu ukuthi lo wesifazane omncane osemusha wayegula kakhulu futhi angeke abe ngenyanga.
Isizathu sokufa okungazelelwe kweVera Glagoleva
UVera Glagoleva washonela komunye wemitholampilo eBaden-Baden, onguchwepheshe wokwelashwa kwezitho zomzimba zangaphakathi. Okwamanje, ukuxilongwa okuqondile kanye neminye imininingwane yokufa kwakhe akungaziwa. Izihlobo ezihlukumezekile zicele ukuthi ucindezelwe ukuba zingabakhathazi ngemibuzo futhi zibandakanya ukuhlela imingcwabo nokuthutha isidumbu somuntu oshonile kusukela eJalimane kuya eMoscow. Bacela bonke abantu abangenandaba nokuhlupheka kwabo, bathandazela ukuthula komphefumulo wenceku esanda kukhonjiswa yoKholo. Ukududuza kwakhe izihlobo nabangane bomuntu oshonile kuvezwe nguMongameli waseRussia uVladimir Putin, ebiza ukufa kukaVera Glagoleva "ukulahlekelwa okungenakukuhlaselwa kwesiko lethu sonke."
Inkanyezi endala yeComedy Woman yayicatshangwa ukuthi ikhulelwe
U-Albina Dzhanabaeva wayekhohliswa isifuba sika-Anna Semenovich
Ukuhlukunyezwa kwemfashini André Tan
U-Natalia Senchukova noViktor Rybin bembula imfihlo yomndeni oqinile
Izihlobo zikaZhanna Friske zifuna ukuxosha uDmitry Shepelev waseRussia
Ukuphuza i-Smoothie yasehlobo
Indlela yokusiza indoda ukulahlekelwa isisindo
I-pie ye-ithintshi engaphenduliwe ngamantongomane
Ubuhlungu emuva - ukuphuthuma kwenkinga
Izindlela ezingu-10 zokuhlukanisa impilo yomndeni
Yini okufanele uyenze uma umenyiwe ukuvakashela?
Izitshalo zokwelapha ngesikhathi sokukhulelwa
Ama-aubergini abhaka kuhhavini
Isipho sakho ngo-Eva Wonyaka Omusha: isithwathwa seqhwa esikhwameni sepolymer, isigaba somfundi nesithombe
Ukuhlunga kahle ekhaya
Umfana omuhle ulungile noma omubi?
Umdlavuza we-vaginal, izimpawu
I-Horoscope ngenyanga kaJanuwari, ingonyama
Izimpawu zokulethwa okulula nokusheshayo
Ukuphila kusukela ekuqaleni noma ngoMsombuluko